Nge-terminal: Imiyalo eyisisekelo ku-GNU / Linux | Kusuka kuLinux
Kunemiyalo ethile abasebenzisi be- I-GNU / Linux kufanele sazi ukuthi isimo saso sibe yisisekelo kakhulu. Kulokhu okuthunyelwe sizokhuluma ngezinye zazo nokuthi zisebenza kanjani, konke esikudingayo ukuphela terminal
1 Ubulala izimbongolo.
2 Ngisebenza namafolda nezinkomba.
3 Imininingwane iyala.
4 Ngisebenza ngamafayela.
Ngicabanga ukuthi umyalo obaluleke kakhulu okumele siwazi ukuthi:
Lokhu kuzoba yikhona okusikhipha ngokungabaza nasezinkathazweni zethu izikhathi eziningi. Ukusetshenziswa kwayo kulula, i-syntax eyisisekelo ngu $ man command, isibonelo:
Ngisebenza namafolda nezinkomba.
Ukushintsha umkhombandlela ngokusebenzisa i-terminal sisebenzisa umyalo cd. Ukusebenza kwayo kulula ku-terminal:
$ cd : Siya ngqo kufolda yethu / yasekhaya.
$ cd /home/elav/Documents/PDF/ : Ake siye kufolda PDF ngaphakathi / ikhaya / elav / Imibhalo.
$ cd .. : Sikhuphuka izinga elilodwa. Uma singaphakathi PDF siya / ikhaya / elav / Imibhalo.
$ cd ../.. : Sikhuphuka amazinga amabili. Uma singaphakathi PDF siya / ikhaya / elav /.
Uma sifuna ukubona ukuthi iyiphi ifolda esikuyo, sisebenzisa umyalo:
Ukwakha ifolda sisebenzisa umyalo we-mkdir:
$ mkdir /home/elav/test : Sakha ifolda yokuhlola ngaphakathi / ikhaya / elav.
$ mkdir -p /home/elav/test/test2 : Sakha ifolda test2ngaphakathi / ikhaya / elav / isivivinyo /. Uma kwenzeka ifolda test ayikho, idaliwe.
Kunemiyalo eminingana yokubuka imininingwane kumafayela noma kumafolda, kanye nesikhala okuso. Okwaziwa kakhulu yi- ls, okusisiza ukubhala uhlu lokuqukethwe.
$ ls : Bhala uhlu lwemibhalo
$ ls -l Bhala uhlu lokuqukethwe njengohlu, ngaphezu kokukhombisa enye idatha.
$ ls -la : Faka kuhlu okuqukethwe kwesiqondisi, kufaka phakathi amafayela afihliwe (anenkathi phambi kwegama)
Sivele sabona isikhala sediski nemiyalo yosayizi kulokhu kungena, ngakho angizibeki.
Kunendwangu eningi okufanele isikwe lapha, kepha kulokhu ngizokhuluma ngemiyalo cp (ukukopisha), mv (ukusika / ukuhambisa) futhi rm (Susa / Susa).
$ cp /home/elav/fichero1 /home/elav/fichero2 : Sakha ikhophi yefayili ye- ifayela1
$ cp /home/elav/fichero3 /home/elav/fichero2 : Siyakopisha bese siyashintsha ifayela3 en ifayela2.
$ cp -R /home/elav /home/elav/bckup : Sikopisha konke okuqukethwe kwesiqondisi izinga ukuze / ikhaya / elav / isipele. The -R (Recursive) kufanele isetshenziselwe amafolda.
$ cp /home/elav/fichero* /home/elav/bckup : Kopisha konke egameni ifayela, noma ngabe kubuya ini, noma ubukhulu.
Okufanayo ngumyalo mv, kepha kulokhu, i- ifayela1 izothuthelwa (noma iqanjwe kabusha) ku- ifayela2.
Endabeni yamafolda, akudingekile ukubeka inketho -R.
Futhi ekugcineni sinomyalo wokususa amafayela noma izinkomba.
$ rm /home/elav/fichero1 : Susa ifayela1.
Futhi maqondana namafolda, uma kufanele sisebenzise inketho -R.
$ rm -R /home/elav/bckup : Susa ifolda bckup.
Ukwenza ngcono le miyalo, singasebenzisa inketho -v (isenzo) lokho kuzosikhombisa esikrinini izenzo ezenziwa ngumyalo ngaleso sikhathi.
Le yimiyalo eyisisekelo, kepha kufanele impela ukuyazi. Kamuva sizokukhombisa abanye.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Kunconyiwe » Nge-terminal: Imiyalo eyisisekelo ku-GNU / Linux
Kungathokoziswa uma lokhu okuthunyelwe okuhle, okuyisisekelo nokubalulekile kwabaqalayo kunamathisela inguqulo yayo ku-pdf noma ukufaka i-WordPress plugins ethumela okokufaka ku-PDF.
Esikhathini esithile esedlule (ezinyangeni ezimbalwa manje, cishe unyaka owodwa) ngibuyekeze ama-plugins athumela ku-PDF kepha awekho lawo agcine engikholisile, ngizobheka okulungele ukuwabeka lapha aquí
Kuthiwani uma uyihlela?
Kukhona amanye amashidi wokukopela, angasetshenziswa ngisho nephepha lodonga, ngabona ngisho nesicelo / ishidi lokukopela elangezwe esigungwini, kepha cishe sonke singesiNgisi.
Mhlawumbe ukuzivumelanisa neSpanishi kwazo kungasiza abafundi abangahle babe khona balolu chungechunge oluthokozisayo lwezihloko ezethula kukhonsoli.
Ngosuku lwakhe 1991 ngathenga incwadi ka-Anaya futhi muva nje ngiyifundile futhi ngakhumbula ingoma ukuthi sishintshe kangakanani, Linux othandekayo.
Uma uthola lezi zingcezu, sishiyele isixhumanisi futhi nami ngokwami ​​ngiyokujabulela ukwenza ukuhumusha okudingekayo 😉
Engingakwazi ukuthi ungakubona yini, uma ungazitholi ngibathumele kuwe
Umyalo wokuhlola ubuye uthakazelise 🙂